10 Maaliyadood ee Qaybinta ugu Fiican Sanadka 2021
Bogga ugu weyn 10 Maaliyadood ee Qaybinta ugu Fiican Sanadka 2021
Table of Contents qari
Waa maxay Lacagaha Index?
Waa maxay Saamiqaybsigu?
Waa Maxay Dhab ahaantii Sanduuqa Tusaha Qaybsiga?
Waa maxay haddaba Lacagaha Index Dividend
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee aan u maalgashan karo maaliyadaha tusmada saamiga?
Miisaaniyada Tusmada Qaybsiga Ugu Fiican
1. Vanguard Equity Income Income Fund Maalgashadayaasha (VEIPX)
2. ETF Global X SuperDividend (SDIV)
3. Sanduuqa Dakhliga Sinnaanta Neuberger Berman (NBHAX)
4. Sanduuqa Qaybinta Istaraatiijiga ee Istaraatijiyadeed ee Federated (SVAAX)
5. Sanduuqa Kobcinta Qiimaha ee T. Rowe Price (PRDGX)
6. Jaantuska Vanguard High Dividend Yield Index Admiral Shares (VHYAX)
7. WisdomTree US Total Dividend Fund
8. iShares Select Dividend ETF (DVY)
9. Sanduuqa Fursadaha Qaybinta Columbia (INUTX)
10. Sanduuqa Kobcinta Qaybsiga Vanguard
Miisaaniyadaha saamileyda ah waa maalgelin wadaag ah ama lacago isweydaarsi ganacsi (ETFs) oo ka kooban kaydyo badan oo isku daya inay raadiyaan tusmada.
Asal ahaan, maaliyadaha tusmada qeybsiga ayaa ku habboon nooc kasta oo maalgashi. Taas macnaheedu waa, ma aha maalgeliye kasta inuu helo rafcaan iyo faa'iido.
Laakiin si aad u hesho dakhli joogto ah oo ka yimaada maalgashiyadii aad samaysay, maaliyadaha tusmada Dividend waa furayaal la hubo.
Maqaalkani wuxuu wax badan ka iftiiminayaa waxa ay ka kooban tahay maaliyadaha tusmada Dividend. Waxa kale oo ay soo saartay liis dhammaystiran oo ah 10ka maaliyadood ee saamiga ugu fiican ee mudan in la maalgeliyo sannadkan 2021. Akhri!
Miisaaniyaduhu waa maalgelin wadaag ah ama lacago isweydaarsi (ETFs) oo maal galiya hantida u dhiganta tusmo gaar ah, sida S&P 500 ama Barclays Capital US Aggregate Float Adjusted Bond Index.
Miisaaniyadaha tusmadu waa farsamo jaban oo lagu maalgashado suuqyo ama warshado gaar ah. Inta badan maaliyadaha tusmada waxay u qaybiyaan saamilayda maalgashadayaasha.
Xeerka Shirkadda Maalgashiga ee 1940 ayaa xukuma miisaaniyada is -dhaafsiga. Maadaama ay yihiin ganacsato maalgashi, maaliyaddan waxaa loo xilsaaray inay u bixiyaan saami kasta wixii dulsaar ah ama saami -qeybsiga ay heleen sanduuqa sanduuqa, kharashyada yar.
Inta badan maaliyadaha tusmada waxay lahaan doonaan xoogaa saami ama dulsaar ah. Lacagtaasi waxay siin doontaa saamilayda maalgashadayaasha mar uun.
Akhri Sidoo kale: Waa Maxay Maalgashiga Kobaca Dakhliga? | Tilmaam Buuxa Oo Ku Saabsan Hantida Weyn
Saami -qaybsigu waa marka shirkad u qaybiso qayb ka mid ah faa'iidooyinkeeda saamileyda halkii ay dib u maalgelin lahayd faa'iidooyinka ama hayn lahayd lacagta caddaanka ah.
Kuwani waxay u dhici karaan si joogto ah, qorshaysan ama si ku -meel -gaadh ah oo ku salaysan go'aannada hoggaanka shirkadda.
Lacagaha saami qaybsiga waxaa la siin doonaa saamileyda iyadoo lagu saleynayo baaxadda saami qaybsiga saami kasta iyo tirada saamiyada ay leeyihiin.
Bixinta lacag -qeybsigu inta badan way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran nooca saamiyada aad leedahay.
Saamiyada Heerka A waxaa laga yaabaa in lagu bixiyo faaiidooyin jadwal go'an, haddiiba, halka saamiyada Class C laga yaabo in la siiyo qiime go'an oo soo noqosho ah.
Sanduuqa saamiga saami qaybsiga waa sanduuqa tusmada oo laga sameeyo agagaarka shirkadaha loo doortay sicirka bixinta saami qaybsiga. Kani wuxuu noqon karaa sanduuq la wada leeyahay ama sanduuq la isweydaarsado (ETF).
Sanduuqa saamiga saamiga waa sanduuq loo qoondeeyay saamiyada ku saleysan bixinta saami qaybsiga. Sanduuqa noocan oo kale ah ayaa sida caadiga ah lagu abaabuli doonaa agagaarka wax -soo -saarka saami -qaybsiga, iyada oo lafteeda lagu tilmaamayo hantida soo saarta boqolleyda soo -noqoshada sannad kasta.
Miisaaniyadaha kale ayaa laga yaabaa inay iskood isu abaabulaan iyadoo la raacayo sicirka lacag -bixinta, iyagoo raadinaya hanti bixisa saami -qaybsiga saddexdii biloodba mar ama bil kasta.
Waxaa muhiim ah in la kala saaro sanduuqa tusmada saamiga iyo sanduuqa bixiya faaiidada.
Marka sanduuqa wadaagga ah ama ETF uu macaash ka helo hantidiisa, waa wax caadi ah in sanduuqa uu siiyo saamilayda milkiilayaashiisa. Tan laguma sameeyo sanduuq kasta, laakiin tiro badan oo iyaga ka mid ah ayaa sameeya.
Meesha ugu habboon ee laga bilaabi karo waa in la xisaabiyo wadarta guud ee qoondaynta hantidaada, oo ay ku xigto go'aaminta inta lacag ah ee aad ku maalgelinayso saamiyada iyo/ama maaliyadda tusmada sinnaanta.
Ka dib markaad dhammaystirto tillaabooyinka horudhaca ah, waxaad booqan kartaa mid kasta oo ka mid ah dukaammada dhimista weyn ee internetka, sida Vanguard, Fidelity, ama Charles Schwab, kuwaas oo dhammaantood bixiya ganacsi ETF lacag la'aan ah (ama aad u jaban).
Waa kuwan saddexda arrimood ee ugu muhiimsan ee la tixgeliyo marka la dooranayo miisaaniyada saamiga saamiga si loo maalgeliyo:
Wax -soosaarka qaybinta. Tani waxay la xiriirtaa tirada saami -qeybsiga la bixiyay oo ah boqolkiiba qiimaha sanduuqa.
Kadib, boqolleyda hantida maaliyadeed ee loo isticmaalay kharashaadka hawlgalka waxaa loo yaqaanaa saamiga kharashka iyo heerka halista.
Ogsoonow, waxaa jira is-dhaafsi u dhexeeya wax-soo-saarka saamiga iyo heerka halista ilaa xad.
Wax -soo -saarka sare wuxuu guud ahaan la xiriiraa halis sare, laakiin saamiyada kharashka badan mar walba uma tarjumaan wax -soo -saarka saami -qeybsiga sare ama heerarka halista hoose.
Intaas waxaa sii dheer, maskaxda ku hay in saami -qaybsiga kaligiis uusan ahayn saadaasha ugu fiican ee guusha mustaqbalka.
Adigoo ku xaddidaya raadintaada shirkadaha bixiya saami -qeybsiga, waxaad iska indha -tiraysaa tiro aad u badan oo shirkado ah, sida teknolojiyadda waaweyn, oo ku ballaarisa qiimeynta qiimaha.
Hubi inaad dhisto faylal kala duwan oo ay ku jiraan dad kala duwan oo ah shirkado hoose oo leh xeelado raasumaal oo kala duwan.
Akhri Sidoo kale: Dib -u -eegista Caymiska Gawaarida ee Xorriyadda ee 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Waa kuwan 10ka maaliyadood ee ugu wanaagsan ee loo qaybiyo saamiyada u qalma in la maalgashado 2021kan:
Vanguard's VEIPX waxay inta badan maalgelisaa shirkado Mareykan ah oo dhisan oo bixiya saamiyo la isku halleyn karo. Hantida sanduuqa ayaa inta badan ah mid gaabis ah laakiin shirkado wax soo saar badan leh.
Natiijo ahaan, marka la barbar dhigo maaliyadaha kale, faa'iidooyinka qiimaha saamiyadu waxay noqon karaan kuwo xaddidan. Sanduuqan waxaa la aasaasay Maarso 21, 1988, wuxuuna bixiyaa saami -qaybsiga saddex -biloodlaha ah.
VEIPX waxay bixisaa 0.28 boqolkiiba saamiga kharashka iyo 2.24 boqolkiiba dhalidda SEC. VEIPX waxay u baahan tahay ballanqaadka ugu yar ee $ 3,000.
Joogtayntu waa weyn tahay, laakiin ka waran maalgashadayaasha Qaybsiga kuwaas oo si fudud u doonaya inay helaan lacagta ugu badan ee suurtogalka ah? Iyaga, sanduuqa Global X “super dividend” waa inuu ku filnaado.
Halkii xoogga la saari lahaa maalgelinta dakhliga ugu bisil ama la isku hallayn karo, SDIV waxay mudnaanta siinaysaa wax -soo -saarka si loo gaaro saami -qaybsiga oo ka badan afar jeer celceliska saamiyada S&P 500.
Dabcan, soo noqoshadaasi waxay la timaaddaa halis sare, maaddaama faylalka tacliimeedyada ay ku jiraan magacyo shisheeye sida shirkado yaryar oo Shiine ah oo laga yaabo inaadan hore u maqlin. Xaqiiqdii, wax ka yar 30% shirkadaha ayaa hadda ku yaal Mareykanka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xoog tirooyin, aragtintuna waxay tahay in ku dhawaad ​​100 ka mid ah shirkadahan ay si ku filan u kala duwanaan doonaan si looga fogaado isbedel xad -dhaaf ah haddii mid ama laba ka mid ah saamiyadan saamiga yar ay la kulmaan dhibaato.
Kaliya xusuusnow halista iyo soo -gaadhista caalamiga ah ee aad u malaynayso sanduuqan $ 1 bilyan.
NBHAX waxay doonaysaa inay abuurto dakhliga saami qaybsiga iyo qaddarinta raasumaalka iyada oo maalgelinaysa saamiyada-bixinta saami-qaybsiga sida saamiyada caadiga ah, adeegyada, kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah (REITs), saamiyada la doorbidi karo ee la beddeli karo, dammaanadaha la beddeli karo sida curaarta, iyo aaladaha soo-saarka sida wicitaanka iyo dhigista fursadaha.
Sanduuqa waxaa la aasaasay June 9, 2008, iyada oo ugu yaraan $ 1,000 looga baahnaa maalgashi bilow ah. Waxay bixisaa saami -qeybsiga SEC oo ah 1.50 boqolkiiba waxayna leedahay saamiga qiimaha 1.06 boqolkiiba.
Maalgashadayaasha aan ku qanacsanayn lacagaha saddexda bilood ah, Federated's SVAAX waxay bixisaa saami bille ah.
Istaraatiijiyadda maalgelinta sanduuqa waxay ku lug leedahay soo saaridda dakhli iyo qaddarin raasumaal oo muddo dheer ah iyada oo xoogga la saarayo saamiyada bixiya saami-qeybsiga ka sarreeya suuqa sinnaanta ballaaran.
Sanduuqa ayaa sidoo kale soo xushay shirkado leh karti u leh koboca Qeybinta, waxaana si gaar ah loogu qiimeeyay Dow Jones US Select Dividend Index.
SVAAX waxay ka kooban tahay saamiyada shirkado waaweyn oo Mareykan ah, iyadoo qaar ka mid ah dammaanadaha dibedda lagu tuuray si wanaagsan.
SVAAX waxay bixisaa saamiga qiimaha 1.06 boqolkiiba iyo 3.21 boqolkiiba dhalidda SEC. Sanduuqa waxaa la aasaasay 30 -kii Maarso, 2005, iyadoo ugu yaraan $ 1,500 looga baahnaa maalgashi bilow ah.
Iyada oo ku saleysan fikradda ah in kordhinta saami-qeybsiga waqti ka dib ayaa ah calaamado wanaagsan oo ku saabsan caafimaadka maaliyadeed iyo koboca shirkadda, PRDGX waxay dooneysaa inay inta badan maal gashato saamiyada shirkadaha waaweyn, iyada oo qaar ka mid ah shirkadaha dhexdhexaadka ah lagu tuuray cabbir wanaagsan.
Boortofooliyada waxay doortaan shirkado leh raad raac xooggan oo ku saabsan bixinta saami -qeybsiga ama kuwa laga yaabo inay kor u qaadaan mushaharkooda waqti ka dib.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Dhiso Maalka: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lagu Dhisi Karo Hantidaada
PRDGX waxay ugu horreyn ka kooban tahay saamiyada shirkado waaweyn oo Mareykan ah oo bixiya saami -qeybsiga saddexdii biloodba mar.
PRDGX waxay leedahay 0.63 boqolkiiba saamiga kharashka. Sanduuqa waxaa la aasaasay 30 -kii Diseembar, 1992 -kii, iyadoo ugu yaraan $ 2,500 looga baahnaa maalgashiga bilowga ah.
Vanguard Dividend Appreciation Index Admiral Shares (VDADX) waa sanduuqa tusmada ee doonaya inuu ku daydo waxqabadka NASDAQ US Dividend Achievers Select Index.
Tusahan oo ah nooc-nooc ah wuxuu ka kooban yahay keydyo kordhiyay lacag-bixinta saami-qeybsiga waqti ka dib. VDADX, oo ah sanduuqa tusmada, waxay ku celcelisaa qaybaha saamiga bartilmaameedka isla saamigaas.
Tan iyo markii la bilaabay Disembar 19, 2013, sanduuqan wuxuu si joogto ah u bixinayay saami qaybsiga saddexdii biloodba mar.
VDADX sidoo kale waxay ku faantaa mid ka mid ah saamiyada ugu hooseeya ee suuqa, 0.08 boqolkiiba, iyo dhalidda SEC ee 1.65 boqolkiiba. Sanduuqa wuxuu leeyahay maalgalin ugu yar $ 3,000.
Vanguard waxay u bixisaa sanduuqan sidii sanduuq la isweydaarsaday (ETF) oo leh astaamo badan oo isku mid ah oo loogu talagalay maalgashadayaasha raadinaya shuruudda maalgashi ee ugu hooseeya. Vanguard High Dividend Yield ETF waa kala duwanaanshaha ETF (VYM).
WisdomTree US Total Dividend Fund waxay leedahay 667 saamiyada Mareykanka oo lagu miisaamayo saami -qaybsiga la saadaaliyay halkii ay ka ahaan lahayd qiimaha suuqa ee shirkadda, sida habka caadiga ah.
Istaraatiijiyadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad maalgelin badan ku sameyso shirkadaha bixiya saami -qeybsiga weyn. Sanduuqa ayaa xoogga saaraya tiknoolajiyada macluumaadka iyo qaybaha maaliyadda.5
Sanduuqan waxaa loogu talagalay in lagu dabagalo Tilmaamaha Wisdom Tree US Dividend Index. Waxay hadda leedahay wax soo saar 12-bilood ah oo ah 2.68 boqolkiiba. Laga bilaabo Abriil 2021, waxay leedahay saamiga kharashka ee 0.28 boqolkiiba.
8. iShares Select Dividend ETFDVY)
ETF kale oo ah saami-qeybsiga weyn, sheygan iShares wuxuu leeyahay hanti dhan $ 18 bilyan. Si kastaba ha ahaatee, waxay bilaabi doontaa miisaaniyadda xigta ee liiskan iyadoo la qaadayo hab tayo leh oo ka kooban qeybaheeda halkii laga raadin lahaa shirkado waaweyn oo bixiya nooc ka mid ah saami qaybsiga.
Gaar ahaan, DVY waxay khuseysaa habka baarista oo u baahan, waxyaabo kale, shan sano oo ah bixinta joogtada ah si loo hubiyo ku -tiirsanaanta.
Sidaas darteed, waxaa la abuuray sanduuq kale oo leh ku dhawaad ​​100 hanti iyo dhalid u dhiganta dhowr ka mid ah lacagihii hore.
Hantida halkan aad bay uga duwan tahay, oo leh meheradda gaaska dabiiciga ah ee Oklahoma Oneok (OKE) iyo behemoth Altria Group (MO) oo qabta meelaha ugu sarreeya.
Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay dhalid aad u sareysa oo leh kaliya 19% hantida tobanka ugu sareysa, taasoo muujineysa inay kor u qaadeyso kala duwanaanshaha.
Akhri Sidoo kale: 10 -ka Lacag Ee Ugu Anshaxa Wanaagsan Maalgashiga Sanadka 2021 | Tusaha Khubarada
INUTX -ta Columbia waxay diiradda saareysaa saami -qeybsiga iyadoo la maal -gelinayo saamiyada shirkadaha caadiyan bixiyay saami -qaybsiga joogtada ah oo sii kordhaya. Sanduuqa wuxuu leeyahay kala -duwanaansho hantiyeedyo kala duwan oo ay ku jiraan kaydka caadiga ah, saamiyada la doorbiday, iyo dariiqyada labadaba dammaanadda gudaha iyo dibaddaba ee kala duwan.
INTUX waxay leedahay saamiga qiimaha 1.05 boqolkiiba iyo 1.96 boqolkiiba dhalidda SEC. Sanduuqa waxaa la aasaasay 1 -dii Ogosto 1988, wuxuuna haystaa $ 2,000 shuruud maalgashi oo ugu yar.
Sanduuqa Kobcinta Qaybsiga Vanguard (VDIGX) wuxuu ugu horrayn maalgeliyaa kala-duwanaansho balaadhan oo kala-weyn (iyo marmarka qaarkood badhtamaha) shirkadaha Maraykanka iyo kuwa caalamiga ah ee aan la qiimayn marka loo eego suuqa oo awood u leh inay si joogto ah u bixiyaan saami-qaybsiga.
Daraasadda sanduuqa waxay raadineysaa inay hesho shirkado leh awood koboc dakhli oo sarreeya, taasoo dhalisay dakhli dheeri ah, iyo sidoo kale diyaarinta maamulka shirkadaha si kor loogu qaado bixinta saami -qaybsiga.
VDIGX waxay bixisaa 0.26 boqolkiiba saamiga kharashka iyo 1.48 boqolkiiba wax soo saarka SEC. Waxay aasaaseen sanduuqa May 15, 1992, waxaana jira $ 3,000 shuruud maalgashi oo ugu yar.
Waa Maxay Maalgashiga Kobaca Dakhliga? | Tilmaam Buuxa Oo Ku Saabsan Hantida Weyn
Dib -u -eegista Caymiska Gawaarida ee Xorriyadda ee 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Sida Loo Dhiso Maalka: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lagu Dhisi Karo Hantidaada
waxaa Pin 0
Ojukwu Queen Chika waa soo -saare ka kooban SEO oo leh in ka badan 3 sano oo waayo -aragnimo shaqo ah. Waxay aad ugu xeel dheer tahay kobcinta baloogyada nuxurka, buugaagta E-buugga, iyo nuqulada Iibka ee badeecadaha iyo adeegyada kala duwan. Haysashada xirfado abaabul oo aad u wanaagsan, xirfadaha maaraynta lacagta, iyo abuurista fikrado kaa caawin kara soo saarista natiijooyinka la rabo. Boqoraddu waxay haysataa shahaadada HND ee Maamulka Ganacsiga iyo Maaraynta oo kaa caawin karta inaad gaarto yoolalkaaga ganacsi iyo maaliyadeed.
Dib -u -eegista Caymiska Xididka 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Sida loo iibsado Coinbase Stock 2022
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Coinbase? Maxay tahay sababta aan u iibsanayo Coinbase Stock?
Waa maxay Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ee Jajabka ah oo ay shaqeysaa?
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah ee Jajabka ah? Sida ay u Shaqeyso6 Tillaabooyinka Tusaha Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka Jajabka…
Dib u eegista maalgashiga ClinkApp: Khayaano mise sharci? Sida ay u shaqeyso
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Clink App? Dib u eegista maalgelinta ee ClinkApp: Dulmarka Appka Sidee buu sameeyaa…
Intee in le'eg ayay qaadataa in laga dhiso Eber Wanaagsan 2022
Tusmada Tusmada Qari Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la dhiso buundada credit wanaagsan 2021? Intee in le'eg...
Dib u eegisyada Maalgelinta Hore: Khayaanada Mise Sharci? Sidee U Shaqeysaa?
Tusmada Tusmada Qari waa maxay Maalgelinta Hore? Sidee u Shaqeeyaa Maalgelinta Hore? Maal-gashadayaasha Marxaladda Koowaad
Hantida Maguurtada Vs Saamiyada: Keebaa Maalgashi Wanaagsan
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah? Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Guryaha Waa maxay…
43 Xigasho Qiiro leh oo ku saabsan Xuska 9/11 ee 2022
10 Laanta Milatariga ee ugu Mushaarka Badan 2022
Waa Maxay Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan Adduunka? | 10 Ugu Fiican 2022
Gobolkee leh Macallimiinta ugu mushaarka badan USA? | 2022 Dib u eegid.
Waa Kuwee Dukaameystayaasha Dahsoon Ee Lacagta Ugu Badan Bixiya? | 15 Shirkadood ee ugu Fiican 2022
Sida Looga Bilaabo Shaqadaada Online ahaan Qoraa Mawduuc Madaxbanaan ah 2021
25ka ugu Sarreeya ee Shabakadaha Lacagta Ugu Badan Bixiya 2021 | Shirkadaha Ugu Fiican
15 buug oo ugu fiican suuqgeynta dhijitaalka ah 2021 -ka waa inuu u akhriyaa suuqgeeyayaasha dhijitaalka ah
Dib -u -eegista Contena 2021: Contena ma sharci baa mise waa khiyaano | Sida ay u shaqayso
17+ Meelaha ugu Fiican ee Madax -bannaan ee Qorayaasha 2022 -ka
Goobaha Xorta ah ee Tartanka Hoose ee Si Fiican kuu Siin kara 15
10 -ka Madal ee ugu Wanaagsan ee Hormariyaasha 2021
17 -ka Madal ee ugu Fiican ee Bilawga ah 2021 -ka
Softwares -ka Qiimaha ugu Fiican Bilaash ah 2021
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bixiyo Si Loogu Qoro Faallooyinka Amazon 2021
Sida Loo Codsado Kaarka Lambarka Bulshada ee Cusub
Maxay ka dhigan tahay markaad ku riyoonayso Masaska? Xaqiiqooyinka
15 Caado Oo Keeni Doonta Inaad Lacag La'aan Ku Noqotid 2021
Sida Loo Bixiyo Deynta Kaadhka Amaahda Ah | Xeeladaha Ugu Fiican
Maxay Dadku Sabool U Ahaadaan
15 Khaladaad Maaliyadeed Ee Ugu Weyn Dadku Sameeyaan
Maalgashiga Waqtiga-Gaaban ee ugu Fiican 2021-ka
Blogyada Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee ugu Fiican: La cusbooneysiiyay 2021
Siyaabo Raqiis Ah Oo Looga Safro Adduunka
Habka ugu raqiisan ee loogu dhaqaaqo dalka oo dhan 2021
Magaalooyinka Ugu Wanaagsan Oo La Awoodi Karo Si Aad U Dhaqaajiso Oo U Bilawdo Nolol Cusub
10 Shaqooyinka TEFL ee ugu Lacagta Badan 2022
Degenaanshaha Florida 2021: Sida Loo Noqdo Degane Florida
21 Filimadood oo Kirismas ah oo Bilaash ah Youtube -ka Sanadka 2021 | Dhererka buuxa
Waa maxay kharashka ku dalbashada cashada Thanksgiving Publix?
17 Shaqooyin/Xirfadaha Dadka Jecel Socdaalka | 2022 La cusbooneysiiyay
10 Meelood Si Aad U Hesho Kirooyin RV Jaban $ 1/maalin
30 Fikradaha Sanad -guurada Jaceylka ee Saaxiibkaaga
Naqshadeeyay & horumariyey Silicon Afrika